Sidee Looga Mid Noqdaa Golaha Wakiilada ee Puntland? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Sidee Looga Mid Noqdaa Golaha Wakiilada ee Puntland?
October 19, 2018 - By: HORSEED STAFF
Golaha Wakiilada ee Puntland waxay kamid yihiin awooda saddexaad ee Puntland leedahay. Axdigii Puntland lagu asaasey 1998 qodobkiisa 9aad waxa uu dhigaayey sifooyinka uu lee yahay qofka kamid noqonaya Golaha Wakiilada, si lamid ah dastuurkii ergooyinku ansixiyeen 2012, qodobkiisa 61aad waxa uu qeexayaa sifooyinka Xildhibaanka iyada oo aan wax badan laga beddelin sida uu qoraayey Axdigii Puntland lagu asaasey waana sidan.
b. In uu yahay muwaadin Puntland ah, Muslim ah, guta waajibaadka diiniga ah, xilkas ah, anshax wanaagsan, miyirkiisu dhan yahay, da’diisuna aanay ka yarayn soddon (30) sano.
t. In aan xuquuqdiisa muwaadinnimo xukun maxkamadeed lagaga laalin shantii sano ee la soo dhaafay.
j. In uu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo-aragnimo u dhiganta.
Marka laga yimaado sifooyinka qofka Xildhibaanka ah ee Puntland laga doonaayo kaas oo ay baaritaankiisa leeyihiin Guddiga ansixinta & xallinta khilaafaadka ayaa la is weydiinayaa qaabka uu ku imaan karo Xildhibaanku, haddii aysan dhacayn doorasho dadweynaha oo dhan ka qaybqaataan.
Sida uu qeexayo Axdigii Puntland lagu dhisey Golaha Wakiiladu waxay ka kobnaanayaan 61 Xildhibaan oo beeluhu iska soo xulayaan, shan xubnood oo haweenka u gaar ah oo aan laga taaban karin oo ka imaanaya gobolada Puntland ee lagu asaasey 1998, saddex xubnood oo la siiyey guddoomiyaashii jamhadihii SSDF, USP iyo SNDU kuwaas oo iyaga u gaar ah laakiin aan la beddeli karin cid kalena aan u wareegi karin oo ah maamuus iyaga ku eg.
Axdiga Puntland lagu dhisey 1998 wuxuu qeexay in Xildhibaanada lagu qaybsadey nidaam gobol oo gobolkastaa helay tiro go’an, sida ku cad lifaaqa kowaad, tirada guud beelo laguma qaybin, laakin beelaha gobolada deggan ayaa dhexdooda ku qaybsadey nidaamka ay u kala deggan yihiin.
Dastuurka ergooyinku ansixiyeen ee Puntland 2012 wuxuu qodobkiisa 60aad farqadda labaad qeexayaa in tirada Xildhibaanada inta laga helaayo tirakoob sax ah ay tahay 66 Xildhibaan.
60.2 Inta laga helayo tiro koob sugan, Golaha Wakiilladu waxaa uu ka koobnaanayaa 66 xilldhibaan oo dadweynuhu ku soo doorto codbixin guud oo toos ah.
Sidoo kale isla qodobkaas waxa uu caddeynayaa muddada uu Xildhibaan ahaan karo oo ah shan sano, ma jirto salaaxiyaad kale oo dastuurku siiyey haddii la beddeli waayo in ay sii ahaanayaan Xildhibaano, mudadu waa shan sano.
60.3 Muddada Golaha Wakiilladu waa shan (5) sano laga bilaabo maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Xildhibaannada Golaha Wakiillada dib ayaa loo soo dooran karaa.
Haddaba waxaan ogaaney sifooyinka Xildhibaanka laga doonaayo in uu lee yahay, waxaan ogaaney tirada guud ee xildhibaanada iyo in aan la beddeli karin oo shardi lagu xiray, waxaan ogaaney in xil hayntoodu tahay shan sano (5) tahay.
Sidee Xildhibaan lagu noqdaa?
Ka hor inta aan su’aasha ka jawaabin waxaa qeexid u baahan sharciga dalka.
Dastuurka Puntland u yaala waxaa loo dejiyey waa nidaamka Xisbiyada badan, waa Xildhibaan ku imaanaya doorasho dadweyne, sidaas darteed ayaan looga hadal xuquuqdii gaarka ahayd ee Axdigu siinaayey haweenka. Khilaafkii u horeeyey ee Puntland galey waxa uu ka dhashey in loo hoggaansami waayey Axdigii Puntland lagu asaasey waxaana khilaafkii kowaad noqdey qodobkii 34aad ee Axdiga, kaas oo aad loo adkeeyey lagana digey in aan waxba laga beddeli karin qodobkaas, maamulkii markaas jirey ee la siiyey saddex sano waxay ku fashilmeen in ay dastuur sameeyaan, dalkana doorasho u diyaariyaan, taas beddelkeed waxayba keeneen in ay saddex sano oo jeebkooda ah ku darsadaan xiliga, waxaana arrintaasi sababtey in boqolaal qof oo reer Puntland ah naftooda ku waayaan, dalkuna burbur galay. Maamuladi iska danbeeyey oo dhan waxay ku fashilmeen in ay gaaarsiyaan himilooyinkii ku qornaa Axdigii Puntland lagu asaasey. Maamulkii Cabdiraxmaan Faroole waxa uu dhamaystiray dastuurkii qabyada ahaa ilaa 2001 ee u bilaabey guddigii Maxamed Cali Yusuf (Gaagaab), inkasta oo aan afti dadweyne lagu ansixin ayuu marey saddex heer oo ah, golaha Xukumadda, golaha Wakiilada iyo cod xanbaarayaal laga soo ururiyey gobolada Puntland oo Garoowe ku ansixiyey, waana dastuurka keliya ee ay Puntland leedahay.
Nidaamka Xildhibaanka Puntland lagu doorto ayaa ah mid lagu qeexay lifaaq oo soo socdey tan iyo sanadkii 2004, lifaaqaas waxaa mar kale dib u cusbooneysiiyey Xildhibaanada Golaha Wakiilada kalfadhigoodi u danbeeyey, waxaana loogu yeeray Lifaaqii afaraad.
Maalmihii u danbeeyey waxaa ka dhacaayey qaar kamid ah magaalooyinka Puntland, shirar ay qabanayeen kuwo u ordaya in ay kamid noqdaan Golaha Wakiilada ee Puntland, waxay qabanayaan shirar ay ka soo qayb-galayaan qaybaha bulshada ee beeshooda kuwaas oo galaya wax lagu sheegay doorasho, arrintan oo ah mid aan horey loo aqoon lifaaqu sheegeyn, keliya laga dhaxley ama laga soo guuriyey doorashadii dadbaneyd ee 2016. Musharixiintan u ordaya in ay ka mid noqdaan Golaha Wakiilada ayaa in badan oo kamid ah ay yihiin shaqaalihii iyo gacan yarayaashii Madaxweyne Cabdiweli Gaas.
Ma xuma in la tartamo oo doorasho la galo, laakiin maaha in wadadii loogu talo galay tartanka laga weeciyo oo ah Nidaamka Xisbiyada. Haddaba si aan dhaqaale badan kaaga bixin, isla markaana aadan u marin waddo qarda-jeex ah oo aan guddiga asnixintu kaa oggolaaneyn waxaa kuu fudud in aad marto qaabka Xildhibaanka lagu soo xulo oo aan waxba laga beddelin ilaa la gaaro doorasho hal qof iyo hal cod.
Beeluhu waa ku kala duwan yihin soo xulida Xildhibaanada, waxaa jira Xildhibaano Golaha Wakiilada fadhiyey ilaa 1998, kuwaas oo ka faa’ideystey xaalado jirey awgeed, in badan oo kamid ah beeluhu waxay ku qaybsadaan nidaam kaltan ah oo marba Xildhibaan la tijaabiyo.
Beesha guud waxay qeexaysaa oo caddeyneysaa jifida iska leh sanadkan waxaana qeexida ka soo talo bixiya nabadoonada beesha waxaana ku dhawaaqa isimka guud ee beesha. Marka la ogaado jifida hoose ee beesha ee iska leh Xildhibaanka, musharixiintooda waxaa kala reeba nabadonada jifidaas kaas/kuwaas oo u gudbiya isimka guud qofka ay u garteen. Isimka guud ee beesha ayaa Xildhibaanada beeshaasi tiro ahaan heshay haddii ay ka badan yihiin hal qof ku soo saara hal warqad oo caddeyneysa Xildhibaanka, waxaana loo gudbiya guddiga Ansixinta iyo xalinta khilafaadka, oo helaya tallaabooyinka musharaxa Xildhibaanku soo marey.
Guddiga Ansixinta iyo khilaafaadku waa ku adag tahay Xildhibaan sheeganaya in ay soo doorteen beeshiisi qaar kamid ah oo dharaar cad Hoteel lagu doortey.
Nidaamka cusub ee Hoteelada dadweynaha la isugu keeno iyo kan nabadonada loo maro labaduba waa laba nidaam oo aan meel ka soo gelin maamul-wanaaga, waxaana Puntland u rajeyn rubuc qarni kadib in ay ka gudubto nidaamkaas.